Haddii aad u baahato daryeel caafimaad | Informationsverige.se
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan imi iyadoo waalid ila socon / Caafimaad qabi / Haddii aad u baahato daryeel caafimaad
Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 14 3 2019
Waxaad xaq u leedahay daryeelka bukaanka iyo daryeelka ilkaha haddii aad u baahato. Waxaa jira noocyo daryeel oo badan oo kala duwan gudaha Iswiidhan. Boggan waxaad ka helaysaa caawimaada in la helo daryeelka saxda kuu ah adiga.
Haddii aad ka weyntahay 18 sano oo heshay sharciga deganaansho waxaad xaq u leedahay daryeel bukaan iyo daryeel ilko oo la mid ah ka dhamaan dadka kale ee jooga gudaha Iswiidhan.
Haddii aad heshay sharciga deganaansho ee Iswiidhan waxaa lagaaga baahanyahay inaad sidato kaarkaaga aqoonsiga marka aad raadsato daryeel ama aad soo qaadanayso dawo dhakhtar kuu qoray.
App-ka leh turjumid (App Store)
App-ka leh turjumid (Google Play)
Dhamaan dadka iskoolka ka dhigta Iswiidhan waxay heli karaan caawimaad lagu magacaabo caafimaadka ardayda. Tani micnaheedu waa inaad la kulmayso kalkaaliso caafimaad ama dhakhtarka iskoolka ee jooga iskoolkaaga. Waxaa kale oo jira la taliye ama dhakhtarka cilmi nafsiga jooga iskoolkaaga oo aad la hadli karto haddii aad murugeysantahay oo xanuusanayso nafsiyan.
Haddii aanad si deg-deg ah u xanuusanayn ama aanad dhaawac qabil waa inaad la xiriirtaa rugta caafimaadka. Rugta caafimaadka waxaad ka heli kartaa caawimaada wax badan. Waxaa kale oo aad rugta caafimaadka la xiriiri kartaa haddii aad xanuusanayso nafsiyan. Rugta caafimaadka waxay kaa caawin kartaa inaad la xiriirto rugaha caafimaadka ee cilmi nafsiga.
Rugaha qaabilaada ee leh dhakhaatiir takhasus ah
Waxaa jira rugo caafimaad oo leh dhakhaatiir takhasusyo kala duwan leh kuwaas oo aan laga helin rugaha caafimaadka oo dhan. Tusaale ahaan cilmi nafsiga, dhakhtarka indhaha iyo dhakhtarka maqaarka.
Akhri dheeraad ku saabsan noocyada kala duwan ee rugaha caafimaadka oo macluumaadka saxda ah ka hel Hagida daryeelka ee 1177 Vårdguiden.
Waxaad helaysaa daryeel ilko oo bilaash ah haddii aad ka yartahay 18 sano oo magan-gelyo ka codsatay Iswiidhan. Haddii aad heshay sharciga deganaansho waxaad helaysaa daryeel ilko bilaash ah ilaa iyo sanadka aad buuxinayso 22 sano.
Dhamaan caruurta iyo dhalinyarada jooga Iswiidhan waxaa loogu yeeraa baaritaanka caafimaad ee dhakhtarka ilkaha. Badanaaba waxaa lagaaga yeerayaa dhakhtarka ilkaha hal mar sanadkiiba. Baaritaankan waxaa loo sameeyaa si loo hubiyo caafimaadka ilkaha iyo tusaale ahaan in la helo daloolka gudaha ilkaha.
Haddii aad tahay magan-gelyo doon waxaa laguugu yeeri doonaa baaritaan ilaa iyo maalinta aad buuxinayso 18 sano.
Haddii aad heshay sharciga deganaansho waxaa laguugu yeeri doonaa baaritaan ilaa iyo sanadka aad buuxinayso 22 sano.
Dawada waxaad ka iibsanaysaa farmasi. Dawooyinka qaarkood waxaa loo baahanyahay in la haysto warqada dawada oo laga helay dhakhtar. Shaqaalaha jooga farmasiga waxay wax badan ka yaqaanaan cudurada kala duwan oo waxay ku siin karaan talo-bixin ku saabsan dawooyinka. Dadka ka shaqeeya farmasiyada waxaa waajib ku ah xog qarinta shaqada.